I-China Lunch bag Suppliers - Isitolo esidayisa yonke impahla kanye Thenga Isaphulelo Lunch bag - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Isikhwama sasemini
(1) Izogcina ukudla kwakho kwasemini ezingeni lokushisa elifanele kuze kube ngamahora amane. Inamaphethini ama-5 amahle, ngalinye elifana nesikhwama, futhi linephakethe elingeziwe ngaphambili, elilungele ukugcina izitsha noma amanabukeni. (2) Uma ufuna ibhokisi elifingqiwe le-bento, le ndlela engabizi kakhulu iphelele (3) Nesikhwama sasemini esincono kunawo wonke emhlabeni, isikhwama sasemini semfashini. Kukhona isibambo esikahle, futhi ukusula kwangaphakathi kulula ukukuhlanza.
I-1) Izogcina ukudla kwakho kwasemini ezingeni lokushisa elifanele kuze kube ngamahora amane. Inamaphethini ama-5 amahle, ngalinye elifana nesikhwama, futhi linephakethe elingeziwe ngaphambili, elilungele ukugcina izitsha noma amanabukeni. (2) Uma ufuna ibhokisi elifingqiwe le-bento, le ndlela engabizi kakhulu iphelele
ayinamanzi futhi ihlala isikhathi eside: ubufakazi obunamanzi nobuthi, obulula ukusula i-clean.Institute of wet paper bags and flimsy plastic boxes, isikhwama sasemini siyaphinde sisebenze futhi sinobungane nomhlaba.Vikela isitoreji esiphakeme sokugcina.
Ukugoqwa okusha: kungavulwa njengetafula lokudlela lapho kudlalwa ngaphandle.Ungqimba lwangaphakathi lwefilimu ye-aluminium alunamanzi futhi aluboni uwoyela, futhi ukungcola kudinga ukusulwa ngobumnene, konga isikhathi nomzamo.
Ukushisa nokubanda isikhwama sokuhlukanisa kungumsebenzi oyisisekelo, uhlobo lwesikhwama esikhethekile esinomphumela wokulondolozwa kokushisa wesikhashana, ungagcina ukubanda / ukushisa, ungqimba lomkhiqizo wokugoqa luyiparele ukotini + ucwecwe lwe-aluminium foil, lunganikeza umphumela omuhle wokuvikela ukushisa.